Garsoorihii Kulankii Real Madrid iyo Bayren Munich oo lagu dhegan yahay | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Garsoorihii Kulankii Real Madrid iyo Bayren Munich oo lagu dhegan yahay
Kadib kulankii xiisaha lahaa ee xalay dhex maray Camaaliqada dalalka Spain iyo Jarmalka Real Madrid iyo Bayren Munich waxaa soo baxayey qayladhaan balaaran oo ku aadan qaabkii Garsoorkii kulankaan oo ku dhamaaday 4-2 Gool ay Guushu ku raacday Naadiga Martida loo ahaa ee Real Madrid.
Kulankaan waxaa dhex dhexaadinayey Garsooraha lagu Magacaabo Viktor Kassai,oo u dhsahay dalka Hungari Waxaana lasoo saaray oo laysku raacay qaladaad waa weyn oo muuqda oo uu ka Galay kulankaan oo ahaa mid Xasaasi ah waxaana afka furtay Macalinka iyo Cayaartoyda Bayern Munich kuwaas oo dalbaday in l;aciqaabo Garsoorkii kulankaan.
Hadaba Maxaa ka mid ahaa qaladaadka uu galay Garsoore Viktor Kassai,iyo Kaaliye yaashiisa Waxaa ka mid ah 2 Gool oo uu dhaliyey Xidiga Real Madrid ee Cristiano Ronaldo kuwaas oo markii dib loo daawaday la ogaadey in ay ahaayeen garab dhaaf Cadaan ah balse aysan dhigin Garsoorkii kulankaan waana Goolashiisii 2 aad iyo 3 aad ee uu dhaliyey.
Sidoo kale Waxaa eedeyn weyn u soo jeediyey Garsoore Viktor Kassai falanqeeyaha kubada cagta ee ka Hawl gala Radio Marca Andujar Oliver kaas oo siweyn u dhaleeceeyey Garsoorahaan gaar ahaan Roosihii uu siiyey Arturo Vidal. kaas oo uu ku tilmaamay in ahaa gebi ahaantiiba mid qalad ah waayo waxa uu yiri Vidal kubada ayuu ku Guuleystey qalada kalana magelin.
Andujar Oliver oo ah Nin siweyn loogu qadariyo Kubada Cagta ayaa sheegay in Cayaaryahanka Bayren Munich ee Arturo Vidal.ay ahayd mar in Calaamada Casaanka ah lasiiyo Waana markii isaga oo jaale qaba ayuu yiri uu si ula kac ah ugu istaagay Casemiro daqiiqadii 48 aad balse waxa uu yiri Roosahaan dambe Waxa uu ahaa mid bataantanba qalad ah waayo waxba Gaarsiin ayuu leeyahay Cayaaryahanka Real Madrid.